यीनै हुन् प्यूठान दुर्घ-टनामा घा’इते हुदा दाहिने हात का’टिएकी बेहुली र घा’इते बेहुला ! • raradiodarpan.com
यीनै हुन् प्यूठान दुर्घ-टनामा घा’इते हुदा दाहिने हात का’टिएकी बेहुली र घा’इते बेहुला !
उनी मा’नसिक रूपमा वि’क्षिप्त छन् । कोही बोल्न खोजे भने कुनै बेला बोलिहाल्छन् । कुनै बेला टोलाएर बस्छन् । बिहीबार अस्पतालको एसी डि’लक्स उपचार कक्षमा
पुग्दा उनी बेड छेउको कुुर्सीमा बसेका थिए । उनको स्वास्थ्यमा पहिलेभन्दा सुधार आएको छ ।प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिका–६ लिबाङका उनै २५ वर्षीय दानबहादुर खड्का माघ २१ गते बेहुला बनेर नौबहिनी गाउँपालिकाको लुङतर्फ गएका थिए ।
लुङमा बेहुली रिमा जीसी र परिवार जन्तीको प्रतीक्षा गर्दै थिए । घरदेखि झन्डै दुई घण्टाको दूरीमा रहेको लुङ पुगी दानबहादुरले रिमासँग लगनगाँठो कसे । उनीसँगै जन्ती बनी उनकी दिदी, भाइ, बहिनी, काका र आफन्ती गरी नौ जना गएका थिए ।
रातिको विवाह भएकाले जन्तीको जिप बेलुका ४ बजेमात्र घरबाट हिँडेको थियो । विवाहको कार्यक्रम सकेर सोही राति ११ बजे बेहुलीसँगै बेहुलीकी बहिनी र भाउजूलाई पनि लिएर जन्ती जिप फर्कि’यो ।
खड्का निवासमा बुहारी आउने रौनकसँगै नाचगान भइरहेको थियो । श्रीमती लिएर आएका दानबहादुर खुसी थिए । जिपमै जन्ती समूहका आफ’न्ती रमाइलो गर्दै आइरहेका थिए ।
घर पुग्न १० मिनेट बाँकी हुँदा अक’ल्पनीय घ’टना भयो ।
जिप सडकदेखि ३ सय मिटर तल खोलामा ख’स्यो । जिपमा सवार बेहुला र उनकी बहिनी माथिल्लो भागमा खसे । उनीहरू दुवै जना समतल परेको स्थानमा अडिए । बेहुली रिमा, उनकी भाउजू सावित्रा जीसी भने खोला किनारमै पुगे ।
माघ २१ गते प्यूठान जिल्लाको गौमुखी गाउँपालिकामा जन्ती गइ फर्केको ग १ ज ५०९२ नम्बरको जिप दु’र्घट-नामा परेको थियो । घट-नामा आठ जनाले ज्या’न गु-माएका थिए । घा’इते भएका बेहुला, बेहुली, बेहुलीकी भाउजू र बेहुलाका बहिनी र भाइको रूपन्देहीको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र बुटवलस्थित मर्सिसिटी अस्पतालमा उप’चार भइरहेको छ ।
बेहुला दानबहादुरले जिप कसरी खस्यो र आफूहरू कसरी बाँचे भन्नेबारे केही याद नभएको बताए । ‘म कहीँ अ’ड्किएँ भन्ने जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि र अघि कसरी जिप ख’स्यो भन्ने होस छैन ।’ उनलाई आफ्नी बहिनीसमेत सँगै अ’ड्किएको याद छ ।
खड्काले आफू होसमा आउँदा जिल्ला अस्पताल बिजुवारको बेडमा रहेको बताए । रातिको समयमा दु’र्घ’टना हुँदा तत्कल उ’द्धार हुन सकेन । दानबहादुरले आफ्नो ढाडमा दु’खाइ बढी भएको बताए । खड्काले आफ्नो विवाहको दिन भएको घट-नाले मनमा ठूलो चो’ट परेको बताए । ‘जीवनभरिलाई तीतो सम्झना भो,’ उनले भने ।
खड्का नजिकैको बेडमा उनकी नवदुलही रिमा रातो टिकीमा थिइन् । उनको अवस्था पी’डादायी बनेको छ । कक्षा १० मा पढ्दै गरेकी रिमाको दानबहादुरसँग मागी विवाह भएको हो । खड्का परिवार माघ १० गते रिमाकहाँ पुगेर विवाहको छिनोफानो गरेका थिए ।
विवाह गर्नैपर्ने भएकाले प्रस्ताव आएपछि राजी भइ विवाह गरेको उनले बताइन् । घट-नामा उनले खोलामा पुग्दासम्म हो’स पाएको बताइन् ।‘ओ बुबा म’रेँ भन्दै चि’च्याएँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि केही थाहा भएन र सम्झन पनि चाहन्नँ ।’घ-टनापछि उनको दाहिने हात गुमेको छ । त्यसले थप मा’नसिक पी’डा दिएको छ ।
उनको दाहिने हातको कुहिनादेखिको तल्लो भाग घट’नामा चुँ’डिएर झ’रेको हो ।निधार र मुखमा सामान्य घाउ छ ।‘विवाह भए पनि पढ्न पाइने सर्त थियो,’ उनले भनिन्, ‘बहिनी गुमाएँ, भाउजूलाई चो’ट लाग्यो । म केही बोल्न सक्ने स्थितिमा छैन ।’उनले आफू बाँचे पनि आठ जनाको मृ’त्युको पी’डा कहिल्यै कम नहुने बताइन् ।
रिमाकी भाउजू सावित्राको दाहिने हात भाँ’चिएको छ । उनको मुखैभरि द’दारिएका घा’उ छन् । निराश मुद्रामा प’ल्टिएकी उनले नन्दलाई पुर्‍याउन जाँदा भएको दु’र्घ’टनाले साह्रै ठूलो चो’ट दिएको बताइन् ।‘कति रमाइलो गर्दै गएका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यो रमाइलो र खुसी एक्कासि जीवनभरको निराशा बन्यो ।’
उनीहरू तीनै जनाको भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजको एसी डिलक्स वार्डमा उपचार भइरहेको छ । दानबहादुरका भाइ र बहिनीको भने बुटवलको मर्सिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । भाइको अहिलेसम्म होस आएको छैन भने बहिनीको स्थिति सामान्य बन्दै गएको छ ।
जिप रातिको समयमा सडकको कुनामा रहेको ढुंगा त’र्काउन खोज्दा तल ख’सेको हुन सक्ने प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानका प्रमुख डीएसपी सत्यनारायण थापाले सडक छेउबाट ढुंगा छलाएर लैजाँदा लगातारको पानीले गलेको जमिनमा जिप भा’सिएर दु’र्घ’टना भएको बताए । -कान्तिपुर